लागूऔषध दुव्र्यसनीमा फस्दै विद्यार्थी
बिहिबार, वैशाख २, २०७८ ०३:५५:४९ युनिकोड
शुक्रबार, चैत २०, २०७७ Dhading Sanchar
धादिङ,२० चैत ।
धादिङबेसीको एक विद्यालयमा पढ्ने छात्रा चोरी केशमा प्रहरीले पक्राउ ग¥र्यो । पैसा चोरेको आरोपमा पक्राउ परेकी उनी ९ कक्षामा पढ्ने १६ बर्षकी छात्रा हुन्। बालिका पक्राउ परेपछि परामर्शको क्रममा उनी दुव्र्यसनीमा फसेको पत्ता लाग्यो।लागु औषध किन्नकै लागि पैसा चोरी गरेकी थिईन । घर छाडेर बाहिर बस्ने, विद्यालय नजाने, टोलाउने र एक्लै बस्ने गरेको एक बर्ष भईसकेको रहेछ । उनी साथिसँगै बसेर गाँजा खाने र बाहिरै बस्ने गरेकी छिन् ।
धादिङबेसीकै एक विद्यालयमा पढ्ने छात्रा पढाई छाडेर विहे गरेर गईन्। धादिङबेसीमा कोठा लिएर बुबाआमाले पढ्न रोखेकी उनी दुव्र्यसनीमा फसीसकेकी रहेछिन्। कक्षा ९ मा पढ्ने उनी दुव्र्यसनीमा फसेको छात्र सँगै विहे गरेर गईन। बजारमा किन्न पाईने ट्याब्लेट समेत खान थालिसकेकी थिईन ।विगत एक बर्षदेखी उनको व्यवहार फरक हुँदा पनि परिवार र विद्यालयले पनि खासै चासो दिन सकेन।
धादिङबेसीकै एक विद्यालयमा पढ्ने छात्र घर छाडेर हिड्न थालेको एक बर्ष भईसकेको रहेछ। घरबाट साथिहरुकोमा बस्न जाने भन्दै बाहिर बस्न थालेका उनी दुव्र्यसनीमा फसेका रहेछन्।राती जंगल वा पुरानो गोठमा बसेर गाँजाको सेवन गर्ने गरेका रहेछन्।
यी माथिका पात्रहरु प्रतिनिधि मात्र हुन्। पछिल्लो समय धादिङबेसीमा दुव्र्यसनीमा फस्ने छात्र/छात्राहरुको संख्या बढ्दै गईरहेको छ।कक्षा ८ देखी १२ सम्मका विद्यार्थीहरु दुव्र्यसनीमा फसेका छन्। विद्यालय तहदेखी उच्च शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरु दुव्र्यसनीमा फेसका छन्।
अभिभावकहरुले आफ्नो बच्चाको बारेमा हेरचाह नगर्दा बालबच्चाहरु दुव्र्यसनीको लतमा फसेका हुन्। छोराछोरीको स्वभाव, बोल्ने शैली र दैनिकी अचानक परिवर्तन हुँदा पनि अभिभावकले खासै चासो दिएको पाईदैन।बालबालिकाको समस्या हो भनेर बसेका अभिभावकहरुलाई आफ्नो छोराछोरी दुव्र्यसनीमा फसेका छन् भनेर थाहा पनि छैन।
बाबुआमाले छोराछोरीलाई आवश्यक ध्यान नदिदा, पारिवारिक वातावरण बिग्रँदा, साथीभाइको लहलहैमा लाग्दा, बढी टाईट गर्दा वा बढी स्वतन्त्र छोड्दा, निराशा, असफलता र देखासेखीको कारण उनीहरु दुव्र्यसनीमा फसेको देखिएको छ ।
यस्ता लक्षण देखिए साबधान हुनु !
बालबालिकाहरु झगडा गरेर चाहिनेभन्दा बढी पैसा मागेमा, घरबाट पैसा र बहुमूल्य सामान हराउँदै गएमा, शौचालयमा लामो समय बिताउन थालेमा, शरीरमा काटिएको खत देखिनु, घरमा ढिलो आउनु, छटपटी हुनु, शरीर काम्नु, सुत्ने र उठ्ने समय अचानक परिवर्तन हुनु, आँखा रातो हुनुु, आँसु आइरहनु, बोली लर्बरिनु, आँखा जुधाएर कुरा गर्न नसक्नु, सरसफाइमा ध्यान नदिनुु, एक्लोपन रुचाउनु,सुस्त देखीनु,रमाईलोमा नजानु, कुनै पनि सृजनसिल काम नगर्नु जस्ता समस्या देखीए साबधान हुनुपर्छ ।
बालबालिकालाई समय दिऊँ !
अधिंकास अभिभावकलाई आफ्नो छोराछोरी सँग बोल्ने समय पनि हुदैन । दिनभरी काम गरेर घर आएका अभिभावक पनि थकाईको कारण बालबालिकाहरु सँग रमाईलो गर्दैनन्। घरमा आएपनि मोबाईल र टेलिभिजनमा व्यस्त हुन्छन्। आफ्नो छोराछोरीको भावनात्मक समस्याको बारेमा कहिल्यै कुरा गर्दैनन्। आफ्ना छोराछोरीलाई डर,त्रासमा राख्ने र राम्रो सँग पढ्नको लागि मात्र दबाब दिने गरेका छन्। बालबालिकाहरु आफ्नो अभिभावकहरु भन्दा बाहिरकै साथिसँग बढी मन पराउछन्।
आफ्नो छोराछोरीको व्यावहार कस्तो हुदै गएको छ,कत्तिको खुसि हुन्छन उनीहरुको भावनाहरु कस्तो छ भनेर बुझ्नुपर्छ । साथै छोराछोरीलाई खेलकुद, कला तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा बढी संलग्न गराउने,गलत व्यक्तिसँगको सङ्गतबाट टाढा राख्ने, धूम्रपान र मद्यपानबाट टाढा राख्ने, लागुऔषधबारे सचेत गराउने, छोराछोरीसँग पर्याप्त समय बिताउने र विचारको आदानप्रदान गरेर उनीहरुलाई लागुऔषधबाट टाढा राख्न सकिन्छ । सम्पत्ति भनेकोनै छोराछोरी भएको कारण पर्याप्त समय दिनेको बानि बसालौँ ।
शरिरको बारेमा खुलेर कुरा गर्ने गरीए पनि मनको बारेमा खासै चर्चा परिचर्चा भएको पाईदैन। भावनात्मक समस्याहरु दबाएर राख्दा समस्याहरु बढ्दै गईरहेको छ ।अहिले सम्म कसरी सोच्ने ? तनावलाई कसरी व्यावस्थापन गर्ने,सकारात्मक सोच कसरी राख्ने,व्यक्तित्व विकास कसरी गर्ने भन्ने जस्ता कुराहरु न पाठमा छन् न त सिकाईन्छनै ।
विद्यालयहरुमा पनि अब मनोपरामर्शको आवश्यकता भएको देखिन्छ । भूकम्प र कोरोनापछि दुव्र्यसनीमा फस्नेको संख्या बढीरहेकोले पनि तनाव,चिन्तालाई कसरी कम गर्ने भनेर मनोपरामर्श नै सन्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनचेतना सँगै परामर्शको कार्यक्रम अभियानको रुपमा गर्न नसके जिल्लामा दुव्र्यसनीको संख्या बढ्ने निश्चित छ । स्थानिय तह र विभिन्न गैर सरकारी संघ–संस्थाको सहकार्यमा दुव्र्यसनी विरुद्धको अभियान सन्चालन गर्न ढिलो भईसकेको छ ।
लेखक रामकुमार थापा नीलकण्ठ नगरपालिका धादिङमा मनोसामाजिक परामर्शकर्ताको रुपमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
प्रतिक्रियाको लागिः [email protected], 9860492378